Jecha Shanee jedhu eessaa maddeef, eenyutu bu’uureessee ka jedhu baruu feetuu? Barruu kana dubbisaa! – Bilisummaa
Jecha Shanee jedhu eessaa maddeef, eenyutu bu’uureessee ka jedhu baruu feetuu? Barruu kana dubbisaa!
Wagoota 10’f Shaneen Jecha Tuffii Ture; Bara ODP kana Ammoo Shaneen Meeshaa Ittiin Oromoo Hal-Diinan Taheera!
Guduunfaa: Kanaan dura, seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti gareen kijibdootaa fi gantootaa ABO akka ofii barbaadanitti deemsisuu sababa yaalanii dadhabaniif gootota QBOf cichoomanii fi jaallan isaanii akeekaa fig galma QBO ABO dhaan gaggeeffamu tiksanii waraabessoota keessaa fi alaarraa hanbisaniin “ABO Shanee” jechaa akka turan ni beekama. Keessumaa namnoonni fi murni naamusa, sansakkaa fi akeeka QBO ABOdhaan gaggeeffamuu cabsanii fedha dhuunfaa fi murnaatti deebi’an akkaataa tarkaanfii ksessoo dhaabaatiin Jaarmiyaa ABO keessaa erga baafamanii booda ABO maqaa balleessuu fi dhaaba adda addaa maq-ibsii ABO tti maxxanfatanii socho’uu filatan. Silaa, siyaasni safuu qaba ture. Namni rakkoo naamusaa ykn akeeka dhaabaasaa sharafsiisee dhaabicha keessaa arii’ame, silaa haamilee fi gahumsa dhaaba siyaasaa biraa hundeessuu hin qabaatu ture. Akkasumas jaarmiyaa siyaasa birootti hin dabalamuu ulaagaan isa/ishee ni kuffisa ture. Carraan nama kanaa diinatti harka kennachuudha! Egaa, safuun Oromoo gama hundumaan badaa jira waan ta’eef safuu siyaasaa cabaa jiru kana kaan akka gootummaatti ilaalaa waan jiruuf callisuuma wayya.
Egaa, namoonni fi qaamonnii ABO diiguudhaaf kijibaa fi olola waggoota kudhanii booda haalli itti ulfaannaan waan dubbatanii fi hojjetan wallaalan. Maqaa ABO Shanee jedhu lagatanii “ABO Daawud Ibsaadhaan Hoogganamu” jechuu filatan. Adeemsa keessa ammoo qalbii diddiirratanii ABO jechuutti deebi’an. Mootummaan ADWUI’s dirqamee ABO jedhee waamuutti; waliin mariiyachuutti darbe. Haata’u malee , gareen ADWUI fi OPDO keessa dhokatee pirojektii ABO balleessuu hojjetaa ture ammas tooftaa jijjiirrachuun bifa quuqamaa fi aantummaa qabuun of dhiyeessee gara QBO tti of dabaluudhaan erga Oromoo fi humnoota Oromoo gowwoomsee booda akkuma ABUT sanaa maqaa adda addaa moggaaseee Oromoof haal duree diinummaa mijeessaa jira. Akkuma ABUT “Shorokeessaa, Dhiphaa, Of Tuulaa, Mankaraaressaa, Kiraa Sassaabaa fi kkf” jechuudhaan namootaa fi qaamota ciccimoo hidhaa, ukkaamsaa, ajjeesaa ture har’ammoo ADWUI’n ADPdhaan gaggeeffamu bifa jijjiirratee Oromoodhaan “Shanee, Abbaa Torbee, WBO” jechuudhaan sanduuqa diinummaa tolchaa jira.h Haaluma kanaanis nama baayyeetu hidhaamaa, ukkaamfamaa, ajjeefamaa, saamamaa, reebamaa jira. Mee egaa, waan Shanee kanaa akka hubattaniif irra deebi’een maxxansa koo yeroo darbee isiniif maxxansa.
Oromoon tokko; Oromiyaanis takka. Oromoon diina tokko qaba; firoota danuu qaba. Barri kun bara itti Oromoon tokko qaama tokko diineffatee qaama biraammoo firoomfatu miti. Kutaan, amantaan, ilaalchi siyaasaa gargar nun baasu!
Har’a ABO gaafa jennuu fi yaadnu tarii ABO’n garee adda addaa qaba jennee amannas, fudhannas. Haqni jiru garuu ABO’n ammayyuu dhaaba tokko dha. Namni ykn qaamni tokko dhaaba duraan jiru keessaa ba’ee yoo maqaa adda addaatiin ani ABO dha jedhe, akka ABO’n garee adda addaa qabuutti fudhachuun sirrii miti. Yoo dhibe ABO’n garee adda addaa qaba kan jedhamu yoo dhaaba ABO jedhamu jalatti garee adda addaan wal-qoqqooddaan jiraatedha: kunis ana ABO sirriin, sunis ana ABO sirriin jedhee of dhiyeessa ta’edha. Fakkeenya salphaan isinii fudhadha. OPDO har’aa keessa garee adda addaatu jira. Garee OPDO Jijjiiramaa TeamLammaa jedhamuu fi garee OPDO dulloomtuu fi ergamtuu namoota biraan durfamu. Gareen sadaffaa kan haala ilaallatee deemudha. Hanga, Caffeen Oromiyaa fi Central Comittee’n OPDO garee tokko of keessaa baasuutti sadanuu ana OPDO sirriin jechuun itti fufa. Kan ABO garuu akkas miti. Caasaan ABO hundi murtoo dabarseen namoonni arii’aman jiru. Kana jechuun warri nuti ABO dha ofiin jedhan kijiba malee ABO miti jechuudha.
Dubbii keenya irratti duubeen gargar caccabuu ABO maal ture? Bara kam jalqabe?
Bara 1996/2004 keessa immoo bifa qindaawaa fi tooftaalessa ta’een hojiin ABO caccabsuu kun deebi’ee mumul’achuu jalqabe. Namoonni Caasaa fi ijaarsa ABO olaanoo keessa jiran wal-qindeessuudhaan yaada lama qabatanii dhufan. Yaadonni sunis: Tokko ABO keessa sochiin gandaa akka jiruu fi kunimmoo sirrachuu akka qabu. Lammaffaa, ilaalcha Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti “Karaan gara Oromiyaa Geessu Xoophiyaa keessani” jedhu cimsuu jalqaban. Seenaa qabsoo ABO keessatti ilaalcha kana kan qabaachaa ture, I/A/H/D duraanii kan ta’an Jaal Leencoo Lataati. Haaluma kanaan, ABO’n jiru kun hundeedhaan jijjiiramuu qaba jechuudhaan piropogaandaa bal’aa fi guddaa ta’e hafarsuutu jalqabame. Kanumarraa ka’uun, qaamni ABO Jijjiiramaa jedhu qilleensuma keessatti, jechuunis otoo beekamtii hin argatiin, sochii qindaawaa fi jabaa ta’e taasisuu jalqabe.
Ergamni ABO Jijjiiramaa yeroo sanaa waan baayyee ta’us akeekni guddaan tokko ABO keessatti “Jijjiirama Hooggansaa Fiduu” kan jedhu isa ifaa fi mul’ataa ture.
Amajjii 08, 2019, Finfinnee, Oromiyaa!
Previous Shaaneen yeroo dhumaatiif siyaasa Oromoo keessaa dhabamuu qabdi.!
Next “Fardi Biraan nama gaha malee hin woraanu!” jedha Oromoon.